TTSweet: Breaking news: မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းထားမည်
Posted by T T Sweet at 3:02 PM
AH September 30, 2011 at 3:12 PM
အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှု့များကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ထပ်တူထပ်မျှ ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
amk September 30, 2011 at 3:48 PM
၀မ်းသာစရာပါ သို့ ပေသိ Dam ဆောက်တာတော့ရပ်ထားမယ် မြေကြီးလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်နေလား တောင်ကတုံးတွေ ဆက်တုံးနေလားကို ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေသင့်ပါတယ် Project တခုလုံးကိုရုပ်သိမ်းသင့်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ လိမ်ခံရတာများနေပြီလေ
An Asian Tour Operator September 30, 2011 at 4:30 PM
Anonymous September 30, 2011 at 4:50 PM
mstint September 30, 2011 at 5:18 PM
သတင်းမှန်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ စွိတီရေ။
Ma Ma ,Thanks for sharing Good News!
we still need to monitor how they cease the project. really or not ??
they said nuclear project is postponed but keep
going on so how???
We have to wait for and watch it weather it's done as they said.I'm pleased for the moment.Tks for sharing good news.
they stop irrawaddy project.
they start thanlwin project.
Anonymous September 30, 2011 at 7:40 PM
they will start thanlwin project.
twist and turn??
အိမ်မက်စေရာ September 30, 2011 at 9:38 PM
ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာ မန့်ထားကြသလို တခြားဘာတွေ ထပ်လုပ်ဦးမလဲ စိတ်ပူရသေးတယ်..နော်
ပျော်တာတောင် ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ဘူး စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့း)
susu September 30, 2011 at 10:46 PM
Aunty Oo September 30, 2011 at 11:28 PM
သတင်းလေးကို ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။
မောင်သီဟ September 30, 2011 at 11:59 PM
San San Htun October 1, 2011 at 3:57 AM
ဝမ်းသာစရာ မင်္ဂလာရှိတဲ့ သတင်းပါပဲ...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 1, 2011 at 4:40 PM
ဒီသတင်းကြားရတာ မဲပေါက်တာထက်တောင် ဝမ်းသာမိပါတယ်..
ကိုထွန်း October 2, 2011 at 4:03 PM
ဒီသတင်းကြားရတာ .. တို့လည်း ပျော်တယ်၊ ဝမ်းသာတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး သဘာဝအလှတရားများ မထိခိုက် မပျက်စီးစေဘဲ၊ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ ကျုပ်တို့ အားအင်တွေပိုတိုးလာပြီ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေကို အသိပညာနဲ့ယှဉ်ပြီး လက်ခံကျင့်သုံးလို့ ခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံသားတွေအဖြစ် ကမ္ဘာကိုမြင်ခွင့်ရစေချင်တယ် . .(###ကိုယ့်နိုင်ငံချမ်းသာဖို့ (အန္တရာယ်မပေးတဲ့)အခြားနိုင်ငံပျက်အောင်လုပ်တဲ့ လူမဆန်တဲ့ အောက်တန်းစားစိတ်ဓါတ်စရိုက်နဲ့ အကောင်တွေကို မုန်းတယ်၊ ရွံတယ်၊ ရှုံ့ချတယ်။###)
မြသွေးနီ October 3, 2011 at 4:43 PM
စုပေါင်းစွမ်းအားရဲ့ အောင်မြင်မှုရလာဒ်တစ်ခုပါဘဲနော်...။ တကယ်ကို ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကို လက်တွေ့ကျကျ ခံစားလိုက်ရသလိုပါဘဲရှင်..။
ÁLVARO BÓMEZ CASTRO October 4, 2011 at 7:02 AM